I-Henderson Bay Retreat - I-Airbnb
I-Henderson Bay Retreat
Houhora, Northland, i-New Zealand
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Nick
I-Henderson Bay retreat ithuthukiswe ngokucophelela ukuze idale futhi iqabule indawo ezungezile, elungele abathanda ukuzidela noma othile nje ofuna isikhathi esithile. Indawo yokulala eyakhiwe esanda kwakhiwa engu-5 ihlanganisa ukwakheka kwesimanje kwezakhiwo nokuzwakala kwendlu yasebhishi yakudala. Amadekhi amakhulu aphezulu naphansi eduze kwezikhala ezinosayizi ovulekile kanye nezicabha ezinkulu ezishelelayo zidala ukugeleza okuhle ngalezo zinsuku ezinde ezishisayo edume ngazo enyakatho ekude yeNew Zealand. Amaqembu ezivakashi ezingaphezu kwe-10 kukhona indlu eseduze etholakalayo.
Indawo yokuhlehla ibekwe endaweni enkulu enamadlelo amahle aluhlaza kanye nezihlahla ezinkulu zokuhlinzeka ngokukhosela emimoyeni. Uhambo lwemizuzu emihlanu wehla ngomgwaqo luholela e-Henderson Bay elinye lamabhishi amangalisa kakhulu eNew Zealand anikezela ngokudoba okumangalisayo, ukutshuza, ukuqwala izintaba nokuntweza.
I-Henderson Bay itholakala kahle imizuzu engama-50 ukusuka e-Cape Reinga ngakho-ke iyindawo ekahle yokwethula uhambo lwakho lwaseNyakatho Ekude noma ukuthatha isikhathi ohambweni lwakho olukhulu. Kunemisebenzi eminingi emihle kanye nezinto ezikhangayo endaweni okuhlanganisa ulwandle olungamakhilomitha angama-90, iSpirits Bay neHouhora Harbour. Le ndawo inemizwa eyihlane eyingqayizivele kodwa uma ufuna i-latte esezingeni eliphezulu noma ubhiya obandayo wasePukenui ilokishi kuqhele ngamaminithi angu-10 kuphela.
Ithimba elise-Henderson Bay retreat lizohlala likhona lapho ushayela ukuze lisize nganoma imiphi imibuzo ongase ube nayo ngesikhathi uhlala. Indawo yokuhlala yakhelwe ukuthi ibe lula ukuyisebenzisa futhi uthole indlela yakho.